CTF နှင့် NUG ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များစာအုပ် (Version 1.0) ထုတ်ဝေ – PVTV Myanmar
တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ COVID-19 Task Force (CTF)၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြုစုထားသော ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များစာအုပ် (Version 1.0) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့က ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
စာအုပ်မှာ ခေါင်းစဉ် (၂၁) ခု၊ စာမျက်နှာ စုစုပေါင်း (၈၇) မျက်နှာပါဝင်ပြီး ရောင်စုံနဲ့ အဖြူအမည်း စာအုပ်ပုံစံ (၂) မျိုးထုတ်ဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာရမယ့် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်အချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းပြုစုထားပြီး စာအုပ် PDF File ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Website စာမျက်နှာ (https://moh.nugmyanmar.org/covid-19-booklet-version-1/) မှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်မှာ အောက်ပါခေါင်းစဉ်တွေ ပါဝင်ပြီး COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတွေ လေ့လာဖတ်ရှုလိုက်နာပါက COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအတွက် များစွာအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁။ COVID-19 ရောဂါဆိုတာဘာလဲ?
၂။ COVID-19 ရောဂါ ဘယ်လိုကူးစက်တတ်သလဲ?
၃။ COVID-19 ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
၄။ COVID-19 မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလဲ?
၅။ မိမိနေအိမ်မှာ COVID-19 သံသယလူနာရှိရင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ?
၆။ COVID-19 ရောဂါနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်/နို့တိုက်မိခင်
၇။ COVID-19 ရောဂါနှင့် အာဟာရ
၈။ COVID-19 ရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး
၉။ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါအခံရှိတဲ့သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ?
၁၀။ မိမိအိမ်မှာ COVID-19 သံသယလူနာရှိရင် နေအိမ်ကို ဘယ်လိုပိုးသန့်စင်ရမလဲ?
၁၁။ COVID-19 နှင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအပေါ် သက်ရောက်မှု
၁၂။ COVID-19 လူနာအနေနဲ့ အောက်စီဂျင်ဘယ်လိုရှူရမလဲ?
၁၃။ အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတွေကို သိပါရစေ?
၁၄။ COVID-19 ဖြစ်ပြီး ပြန်သက်သာလာတဲ့ လူနာအနေနဲ့ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ?
၁၅။ COVID-19 ရောဂါနှင့် ကာကွယ်ဆေး
၁၆။ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ အယူအဆအမှားတွေက ဘာတွေလဲ?
၁၇။ COVID-19 ရောဂါသံသယဖြင့် သေဆုံးသူများကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရမလဲ?
၁၈။ COVID-19 ရောဂါကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကုသနိုင်သော နေရာများ
၁၉။ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ မှန်ကန်သော ဗဟုသုတများ မေးမြန်းရန်
၂၀။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း
၂၁။ COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇသစ် အိုမိုင်ခရွန် (Omicron variant) ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (As of 29.12.2011)
(၇-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ